EditShare Cloud စွမ်းဆောင်ရည် TV5 သည်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုကို ၄၀% အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည် NAB သတင်းများ | 40 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » EditShare Cloud စွမ်းဆောင်ရည် TV5 သည်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုကို ၄၀% အထိတိုးမြှင့်ရန်ကူညီသည်။
Boston, MA - ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် EditShareပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုံခြုံမှုနှင့်အသိဥာဏ်ရှိသောသိုလှောင်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများကိုအထူးပြုသည့်နည်းပညာခေါင်းဆောင်®သည်ထုတ်လွှင့်သူများနှင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီများအား EFS shared သိုလှောင်မှုနှင့် FLOW မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူကြီးထွားနေသောပရိုဂရမ်မာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အဝေးထိန်းအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုကူညီသည်။ ဖိလစ်ပိုင်အခြေစိုက် TV5 သည်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သောဖိလစ်ပိုင်အကွာအဝေးတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီ (PLDT) ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ EditShareလက်စွဲလုပ်ငန်းအသွားအလာ ၅၀ ကျော်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်နှင့်ဝေးလံသောထုတ်လုပ်မှုအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုကို ၄၀% အထိတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် FLOW ၏ smart workflow နှင့် cloud စွမ်းဆောင်ရည်များကိုမြှင့်တင်ရန်၎င်း၏ Reliance နှင့် Novaliches လုပ်ငန်းများ၌ပူးပေါင်းဖြေရှင်းမှုများ။
“ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ၀ န်ထမ်းအမြောက်အများဟာအိမ်ကနေအလုပ်ထွက်ခဲ့ကြရတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အစီအစဉ်တွေ၊ မိတ်ဖက်ချန်နယ်တွေနဲ့ကွန်ရက်တွေအတွက်အစီအစဉ်အသစ်တွေလုံလုံလောက်လောက်မဖန်တီးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ပရိုဂရမ်းမင်းတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သည် EditShare ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ကွန်းတိုက်ထဲသို့အသာပုတ်ပါ၊ အကြောင်းအရာကိုပြန်လည်ထုတ်ယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အစ်မလိုင်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုမျှဝေရန်။ ကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်ငန်းများစွာကိုအလိုအလျောက်လုပ်ရန်နှင့်အရင်းအမြစ်များထပ်ထည့်ရန်မလိုဘဲအသင်းအဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်စရာမလိုပဲအဝေးမှအလုပ်လုပ်ရန် FLOW ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်” Angelito R. Salazar ဂျူနီယာ, TV-post ထုတ်လုပ်မှု၏အကြီးအကဲ, TV5 ။ "EditShare ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအလိုအလျောက်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုဒီဇိုင်းဆွဲရာ၌ကူညီပေးသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသောလုပ်ငန်းအသွားအလာဒီဇိုင်းကိုကူညီရန်သူတို့နက်ရှိုင်းစွာတူးခဲ့ကြသည်။
TV5 သည်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှအဓိကထုတ်လွှင့်သူသုံး ဦး အနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဖိလစ်ပိုင်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အခြားဒေသများအတွက်သတင်းများ၊ အားကစားနှင့်အကြောင်းအရာအလိုက်အစီအစဉ်များကိုဖန်တီးရန်နှင့်ဖြန့်ဝေရန်ရည်ရွယ်သည်။ EditShareအဆုံးမှအဆုံးသို့စမတ်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းမှုများသည် TV5 အဖွဲ့အားအကြောင်းအရာများကိုအဝေးမှကြည့်ရှုနိုင်ရန်နှင့်မကြာခဏကျယ်ပြန့်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်အသစ်သောဖန်တီးထားသောပရိုဂရမ်အစုများကိုကွန်ရက်စာမျက်နှာများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိုင်းများမှမျှဝေရန်လုံခြုံသောကွန်ယက်တစ်ခုပေးထားသည်။
“ ဟုတ်တယ် EditShareကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားသူတို့၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေပြီးသူတို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုပြန်လည်မြင်ယောင်စေနိုင်သောပွင့်လင်းသောပလက်ဖောင်းနှင့် cloud ဆန်းသစ်တီထွင်မှု” APAC ရောင်းချမှုဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ Alan Dishington အားပြောကြား EditShare. TV5 သည်ဖောက်သည်များမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုအဓိကဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် EditShareအဝေးထိန်းထုတ်လုပ်မှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်သယံဇာတများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲအရာအားလုံးကို output ကိုအကြီးအကျယ်ချဲ့ထွင်ရန်လုံခြုံစိတ်ချရသောဟိုက်ဘရစ် cloud တွင်ဖြေရှင်းနည်းများ။ ဒါဟာအောင်မြင်တဲ့နည်းပညာပေါင်းစပ်မှုပဲ။
TV5 နှင့်ပိုမိုလေ့လာရန် EditShareကျေးဇူးပြု၍ ဖောက်သည်၏မီးမောင်းထိုးပြခြင်း https: // ကိုဖတ်ပါ။editshare.com / အရင်းအမြစ်များ /
EditShare ထုတ်လုပ်မှု၊ ထုတ်လုပ်မှု post၊ မီဒီယာအသစ်များ၊ အားကစားနှင့်ပညာရေးစျေးကွက်များအတွက်ကွန်ယက်မျှဝေထားသောသိုလှောင်မှုနှင့်စမတ်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများတွင်နည်းပညာခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သင် on-prem၊ cloud၊ hybrid ဖြေရှင်းမှုများလိုအပ်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အဆင့်တိုင်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ ၎င်းတို့တွင်မီဒီယာအမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သိုလှောင်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်အရန်သိမ်းဆည်းခြင်းဆော့ဖ်ဝဲများ၊ မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်လျှောက်လုံးပေါင်းစည်းမှုကိုဖွင့်ပေးသည့်ခိုင်မာသောပွင့်လင်းသော APIs များပါဝင်သည်။ ဖောက်သည်များနှင့်မိတ်ဖက်အောင်မြင်မှုသည်အဓိကအချက်ဖြစ်သည် EditShareကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီအတွေ့အကြုံကိုရရှိစေသည့်အဓိကတန်ဖိုးများမှာဒုတိယနှင့်လုံးဝမတူပါ။
© 2020 EditShare LLC ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ EditShare®တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည် EditShare.
IPV's MAM: Advanced Metadata နှင့် AI Integrations များကိုဖုံးအုပ်ရန်ရှင်းပြခဲ့သည် - အောက်တိုဘာလ 28, 2020
Pocket Cinema Camera 6K ဖြင့် Mercedes-AMG လူမှုမီဒီယာအကြောင်းအရာရိုက်ကူးခြင်း - အောက်တိုဘာလ 28, 2020
“ ငါမြင်သည့်အတိုင်း” သည်အဝေးမှရိုက်ကူးရန် Pocket Cinema Camera 6K ကိုအသုံးပြုသည် - အောက်တိုဘာလ 28, 2020
ယခင်: JR09041 - ဘူတာ / အသံလွှင့်ဌာနအိုင်တီမန်နေဂျာ
နောက်တစ်ခု: အားကစားအတွက်အဝေးမှထုတ်လုပ်မှုကိုလေ့လာရန်အတွက် SMPTE ဟောလိဝုဒ်၏“ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတီထွင်သူနှင့်တွေ့ဆုံရန်” Webinar